वडा स्तरीय प्रथम उपाध्यक्ष भलिवल कप चैत १६ गते देखी कानेपोखरीमा हुर्दै - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / वडा स्तरीय प्रथम उपाध्यक्ष भलिवल कप चैत १६ गते देखी कानेपोखरीमा हुर्दै
वडा स्तरीय प्रथम उपाध्यक्ष भलिवल कप चैत १६ गते देखी कानेपोखरीमा हुर्दै
शनिबार, चैत १२, २०७८ , निगरानी टाइम्स
चैत १२ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा वडा स्तरीय प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कप–२०७८ हुने भएको छ ।
शुक्रबार कानेपोखरी खेलकुद परिषद समितिले गाउँपालिकामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै खेलहुने बारे जानकारी दिएको हो । खेल चैत १६ गते सुरु भएर १९ गते समापन हुने छ । वडा नम्बर ६ स्थित जनसेवा माविको खेल मैदानमा हुने कानेपोखरी खेलकुद परिषद समितिका अध्यक्ष चरण गुरुङले बताए ।
खेलको विजेता टिमले नगद ५० हजार र उपविजेताले ३० हजार साथै ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र पाउने छन् । खेलमा उत्कृष्ट खेलाडी, स्पाइकर, डिफेन्स, ब्लकर, लिफ्टर विद्यामा जनही ३ हजार पुरस्कार वापत प्रदान गरिने समितिका सचिव एविन पाठकले बताए ।
खेलमा गाउँपालिकाको ७ वटै वडाले सहभागीता जनाउने छन् । खेलको उद्घाटन र समापन गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामले गर्ने भएको छ । कुलतमा लागेका युवाहरुलाई खेलको माध्यमबाट सही मार्गदर्शन गराई उनीहरुको भविश्य उज्वल बनाउन प्रयन्न गर्ने र फुटबल खेलको माध्यमबाट यस कानेपोखरी गाउँपालिकालाई जिल्ला, प्रदेश हुर्दै राष्ट्र मै चिनाउनका लागि प्रयत्न गर्ने लगाएको उद्देश्य सहित खेलको आयोजना गरेको समितिका सदस्य मनोज अधिकारीेले बताए । खेल अवधिभर ३ लाख ३० हजार हुने आयोजक समितिका अध्यक्ष चरण गुरुङले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामले शुभकामना मन्तव्य राखेकी थिइन् । त्यसैगरी वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकी, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारी, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेत लगाएत उपस्थित रहेका थिए ।